Abusua Agyapade a Nkyirimma Anya so Mfaso | Asetenam Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maya Myanmar Nahuatl (Central) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Agyapade a Nkyirimma Anya so Mfaso
Kevin Williams anom asɛm
Nkurɔfo ka sɛ mesɛ me papa paa. Wɔka sɛ me nneyɛe, m’ani mma, ne sɛnea meyi aseresɛm nyinaa sɛ no. Ɛnyɛ weinom nko na ɔde gyaw me, wagyaw me ade foforo koraa. Ɛyɛ agyapade bi a nkyirimma anya so mfaso. Momma menkyerɛkyerɛ mu.
Me ne me papa rehwɛ yɛn nananom mfonini
January 20, 1815 na wɔwoo me nana, nana, nana a wɔfrɛ no Thomas (1) * Williams wɔ Horncastle, England. Wɔwoo no no, mfe mmienu pɛ na ne maame wui, enti ne papa John Williams na ɔtetee ɔne ne nuanom mmiɛnsa a wɔka ne ho. John tetee Thomas ma ɔbɛyɛɛ kapentani, nanso Thomas nyinii no, ɔsesaa n’adwuma.
Saa bere no, na nyamesom afi ase regye ntini wɔ England nyinaa. Ná Ɔsɛmpakafo John Wesley atwe ne ho afi Anglikan asɔre no ho akɔtew kuo bi a wɔfrɛ no Methodists. Bible a ankorankoro bɛsua ne asɛmpaka adwuma no paa na saa kuo yi kaa ho asɛm. Wesley nkyerɛkyerɛ no mu trɛw ntɛmntɛm na Williams abusua no gyee ne nkyerɛkyerɛ no toom denneennen. Thomas bɛyɛɛ Wesley kuo no ɔsɛmpakafo, na ntɛm ara na otuu ne ho mae kɔyɛɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ South Pacific. July 1840 mu no, ɔne Mary, (2) ne yere a waware no foforo no tu kɔɔ Lakeba Island, * wɔ Fiji. Ɛyɛ supɔw a ogya taa tu fi mmepɔw mu wɔ hɔ, na saa bere no na nkurɔfo a wɔte hɔ no nso we nnipa nam.
WƆNE NKURƆFO A WƆWE NNIPA NAM KƆTENAE
Bere a Thomas ne Mary kɔɔ Fiji no, mfiase no wɔfaa ahokyere mu paa. Ná wɔtumi de nnɔnhwerew pii yɛ adwumaden wɔ awia so. Afei nso, wɔhyiaa ɔhaw ahorow a na ani yɛ nyan. Ebi ne abusua ntam akodi a na ɛrekɔ so, akunafo ne mmofra a na wɔkum wɔn yayaaya, ne nnipa nam a nkurɔfo we. Weinom nyinaa akyi no, na nnipa pii sɔre tia asɛm a wɔreka no. Yareɛ bɔɔ Mary ne n’abakan John ma ɛkaa dɛ sɛ wɔwui. Wɔ afe 1843 mu no, Thomas kyerɛw sɛ: “Ná nneɛma ahyɛ me so. . . . Anka adwennwen reyɛ amene me.” Nanso ɔne Mary gyinaa pintinn, na Yehowa Nyankopɔn mu gyidi a na wɔwɔ no hyɛɛ wɔn den.
Saa bere no, Thomas de kapenta adwuma ho nimdeɛ a ɔwɔ no sii dan bi wɔ Fiji; Europe nko ara na na wɔtaa si saa dan no. Ɔsii dan no sii adum so, enti na ɔkwan da ase. Sɛnea ɔsii no no maa Fijifo a wɔwɔ hɔ no puw bɛhwɛɛ wɔn ani so ade. Aka kakra ma wawie dan no na Mary woo ne babarima a ɔtɔ so mmienu a wɔfrɛ no Thomas Whitton (3) Williams; ɔno na ɔwoo me nana, nana papa.
Afe 1843 mu no, Mary kunu Thomas Williams boa ma wɔkyerɛɛ Yohane Asɛmpa no ase kɔɔ Fiji kasa mu. Ná adwuma no nna fam mma no koraa. * Ná ɔwɔ ɔdom akyɛde bi; ɔyɛ obi a na ɔde n’ani to fam, enti na ɔnim nnipa asetena ho nsɛm yie. Ɔtoo ne bo ase yɛɛ nhwehwɛmu na ɔyɛɛ nwoma bi a wɔfrɛ no Fiji and the Fijians (1858); ɛyɛ nwoma a ɛka Fijifo a wɔtenaa ase bɛyɛ mfe 200 ni no ho nsɛm.
Mfe 13 a Thomas dii wɔ Fiji no, wantena ne to so koraa, enti ɔyɛɛ mmerɛw, na ɔne n’abusua tu kɔɔ Australia. Thomas de mfe pii yɛɛ asɔfodwuma, na awiei koraa no owui wɔ Ballarat, Victoria, wɔ afe 1891 mu.
“SIKA KƆKƆƆ” WƆ APUEI FAM
Wɔ afe 1883 mu no, Thomas Whitton Williams ne ne yere Phoebe, (4) ne wɔn mma tu kɔɔ Perth a ɛwɔ Western Australia. Saa bere no, na wɔn ba a ɔtɔ so mmienu a wɔfrɛ no Arthur Bakewell (5) Williams, adi mfe nkron; ɔno na ɔwoo me nana, nana.
Bere a Arthur dii mfe 22 no, ɔde ne ti boom kɔɔ Kalgoorlie sɛ ɔrekɔpɛ asetena pa. Kalgoorlie yɛ kuro a wɔtu sika kɔkɔɔ wɔ so paa. Ɛda Perth apuei fam, na wofiri Perth rekɔ hɔ a, ɛyɛ kilomita 600. Ɛhɔ na ɔkenkanee Yehowa Adansefo a saa bere no na wɔfrɛ wɔn International Bible Students no nwoma bi. Afei nso, na ɔkra Zion’s Watch Tower. Arthur ani gyee nsɛm a ɔkenkanee no ho na ɔfirii ase kaa nea wahu no ho asɛm kyerɛɛ afoforo, na na ɔne wɔn hyiam sua Bible. Saa kwan yi so na Yehowa Adansefo a ɛnnɛ wɔwɔ Western Australia no fii wɔn dwumadi ase.
Arthur kaa nea na ɔresua no ho asɛm kyerɛɛ n’abusuafo nso. Arthur papa Thomas Whitton ani gyee ho sɛ ne ba no de ne ho abɔ Bible Asuafo no, nanso ankyɛ na ne papa no wui. Arthur maame Phoebe, ne ne nuanom mmaa a wɔfrɛ wɔn Violet ne Mary nso bɛyɛɛ Bible Asuafo. Violet de ne bere pii kaa asɛmpa no anaa ɔbɛyɛɛ ɔkwampaefo. Arthur kaa Violet ho asɛm sɛ, ɔyɛ “ɔkwampaefo nsiyɛfo a ne so bi mmae da wɔ Western Australia.” Ɛbɛtumi aba sɛ Arthur haahaa n’ani kaa ne nua no ho asɛm, nanso nokwasɛm ne sɛ, nsi a Violet de kaa asɛmpa no nyaa Williams asefo a akyiri yi wɔbae no so tumi paa.
Bere bi akyi no Arthur waree, na ɔtu kɔɔ Donnybrook. Ɛyɛ kuro a wɔdua nnuaba wom paa, na ɛda Western Australia anafo fam atɔe. Ɛhɔ na wɔtoo ne din “Old Mad 1914!” efisɛ na ɔde nsi ka Bible nkɔmhyɛ a ɛtwe adwene si saa afe no so ho asɛm. * Bere a Wiase Ko 1 pae gui no, wɔanni ne ho fɛw bio. Ná Arthur taa di nkurɔfo a wɔbɛtɔ ade wɔ ne sotɔɔ mu no adanse, na na ɔde Bible ho nwoma gu sotɔɔ mpoma no anim sɛnea nnipa pii bɛhu. Arthur kasa tiaa Baasakoro nkyerɛkyerɛ denneennen, enti na wakyerɛw abɔ sotɔɔ no mpoma anim sɛ obiara a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ Baasakoro yɛ Bible nkyerɛkyerɛ no, ɔbɛma no Australiafo sika pɔn 100. Nanso, obiara antumi anyi ne ti ankɔgye sika no.
Williams fie bɛyɛɛ baabi a wɔhyiam sua Bible, na ɛhɔ na na wɔyɛ asafo nhyiam wɔ Donnybrook. Akyiri yi, Arthur sii Ahenni Asa anaa baabi a wɔhyiam som wɔ kuro no mu; ɛno ne Asa a edi kan a wɔsii wɔ Western Australia. Aka kakra ama Arthur adi mfe 80 mpo no, na ɔtumi hyɛ n’atade bɔ ne tae kama huri tena ne pɔnkɔ bi a ɔfrɛ no Doll so kɔka asɛmpa no wɔ Donnybrook mantam no nyinaa mu.
Ná Arthur mpɛ ne ho asɛm, obu ade, na na ɔyɛ nsi; nea ɔyɛe no nyaa ne mma so tumi paa. Ne babaa Florence (6) kɔyɛɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ India. Ne mma mmarima, Arthur Lindsay (7) ne Thomas de mfe pii somee sɛ asafo mu mpanimfoɔ te sɛ wɔn papa.
“SWEET LADY” WILLIAMS
Arthur Lindsay Williams yɛ me nana papa, na n’ayamye nti, na nkurɔfo pɛ n’asɛm paa. Ná ɔnya nnipa ho bere, na na ɔdi wɔn ni. Afei nso na ɔnim sɛnea ɔde akuma bu nnua, enti mfe 12 a wɔde yɛɛ nnuabuo ho akansi no, ɔdii nkonim mpɛn 18.
Nanso bere a Arthur huu sɛ ne ba Ronald (8) (me nanabarima) a saa bere no na wadi mfe mmienu maa akuma so kɔtwitwaa aprɛ ketewa bi a ɛsi yɛn fie ho no, n’ani annye ho koraa. Ronald maame tɔɔ ne bo ase de ahoma kyekyeree dua no, na bere a enyini soo aba no, ɛbɛyɛɛ dɛ yie. Enti wɔbɛfrɛɛ aprɛ no, Lady Williams. Saa aprɛ yi na akyiri yi wɔnyaa aprɛ foforo a wɔfrɛ no Cripps Pink no firii mu; ɛyɛ aprɛ a agye din paa wɔ wiase no mu baako.
Akyiri yi, me nana Ronald anaa Gramp, sɛnea na mefrɛ no no de ne ho hyɛɛ adansi adwuma mu. Ɔne me nanabaa tuu wɔn ho mae de mfe pii boaa adansi adwuma a Yehowa Adansefo a wɔwɔ Australia ne Solomon Islands yɛe no. Seesei Gramp reyɛ adi mfe 80, na ɔda so ara som sɛ asafo mu panin na ɔboa ma wɔsisi anaa wɔsiesie Ahenni Asa wɔ Western Australia.
MENTOTO AGYAPADE A WƆDE AMA ME NO ASE
M’awofo Geoffrey (9) ne Janice (10) Williams suasuaa wɔn awofo, enti wɔtetee me (12) ne me nuabaa Katharine (11) sɛnea yɛbɛbɔ yɛn bra sɛ Kristofo. Bere a medii mfe 13 no, me ara mesii gyinae sɛ mɛsom Yehowa. Bere bi, yɛkɔɔ Kristofo nhyiam kɛse bi, na nhyiam no ase no, John E. Barr, a na ɔka Yehowa Adansefo Akwankyerɛ Kuo ho no hyɛɛ mmofra a wɔretie asɛm no nkuran sɛ: “Monsɛe agyapade nwonwaso a mowɔ no; hokwan a mowɔ sɛ mobɛhu Yehowa na moadɔ no no.” Saa anwummere no ara mehyiraa me nkwa so maa Yehowa. Mfe mmienu akyi no, mebɛyɛɛ ɔkwampaefo.
Ɛnnɛ, me ne me yere Chloe, de bere pii reka asɛm no wɔ Tom Price. Ɛyɛ kuro bi a ɛwɔ akyirikyiri wɔ Western Australia a wɔtu sika kɔkɔɔ wɔ so. Yɛde bere kakra yɛ adwuma hwɛ yɛn ho. M’awofo ne me nuabaa Katharine ne ne kunu Andrew, yɛ akwampaefo wɔ Port Hedland. Ɛyɛ kuro a ɛda Tom Price atifi fam bɛyɛ kilomita 420. Me ne me papa nso som sɛ asafo mu mpanimfoɔ.
Yɛn nana, nana, nana, Thomas Williams bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛsom Yehowa Nyankopɔn. Ɔdɔ ne gyidi a abusua no wɔ wɔ Onyankopɔn som ho no yɛ agyapade a wɔde agyaw me nso. Ɛyɛ nhyira kɛse ma me paa sɛ me nsa aka honhom fam agyapade a ɛte saa.
^ nky. 5 Nɔma no kyerɛ nnipa a wɔwɔ mfonini a ɛwɔ kratafa 12 ne 13 no.
^ nky. 6 Bere bi na wɔfrɛ no Lakemba Island. Ɛwɔ Fiji apuei fam baabi a wɔfrɛ hɔ Lau Group.
^ nky. 10 Ɔsɛmpatrɛwfo John Hunt na ɔkyerɛɛ Apam Foforo no dodow no ara ase kɔɔ Fiji kasa mu, na wɔtintimii wɔ afe 1847 mu. Nea ɛma ne nkyerɛase no da nsow koraa ne sɛ, Onyankopɔn din “Jiova” no pue wɔ Marko 12:36, Luka 20:42, ne Asomafoɔ Nnwuma 2:34.
^ nky. 16 Hwɛ nkekaho no asɛmti a ɛne “1914—Afe Titiriw Wɔ Bible Nkɔmhyɛ Mu” a ɛwɔ Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nwoma no mu no. Yehowa Adansefo na wɔtintimiiɛ, na ɛwɔ Intanɛt so wɔ www.jw.org.